Ikwe Nkwa Enweghị Mmekọahụ Ọ̀ Na-Eme Ka Ndị Na-eto Eto Ghara Inwe Mmekọahụ Tupu Ha Alụọ Di Ma Ọ Bụ Nwunye? | Ndị Na-eto Eto Na-ajụ, Sị
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Lingala Lithuanian Malagasy Malayalam Myanmar Norwegian Nzema Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Tiv Turkish Ukrainian Umbundu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Gịnị bụ mmadụ ikwe nkwa na ya agaghị enwe mmekọahụ?
Nkwa a ọ̀ na-eme ka ndị na-eto eto ghara inwe mmekọahụ tupu ha alụọ di ma ọ nwunye?
Ihe ka mma ị ga-eme
N’obodo ụfọdụ, ndị na-eto eto na-edejupụta akwụkwọ ma ọ bụ jiri ọnụ ha kwee nkwa na ha agaghị enwe mmekọahụ ruo mgbe ha lụrụ di ma ọ bụ nwunye.
Ọtụtụ ndị matara banyere ihe a n’afọ 1990, mgbe Southern Baptist Convention dị n’Amerịka malitere ihe omume ha kpọrọ “True Love Waits,” ya bụ, “Ezigbo Ịhụnanya Na-enwe Ndidi.” N’ihe omume ahụ, ha na-agwa ndị na-eto eto ka ha na-eme ihe dị mma, jirikwa ihe ụfọdụ Baịbụl kwuru na-agba ha ume ka ha ghara inwe mmekọahụ tupu ha alụọ di ma ọ bụ nwunye.
Ka obere oge gara, a malitere ihe omume ọzọ yiri nke mbụ ahụ. Ma na nke a, a na-enye ndị kwere nkwa ahụ mgbaaka ọlaọcha iji gosi na ha ekweela nkwa ahụ nakwa ka ọ na-echetara ha na ha agaghị enwe mmekọahụ tupu ha alụọ di ma ọ bụ nwunye.
Nkwa a ọ̀ na-eme ka ndị na-eto eto ghara inwe mmekọahụ tupu ha alụọ di ma ọ bụ nwunye?
Ihe ndị mmadụ na-aza dị iche iche.
Christine C. Kim na Robert Rector kwuru na ‘ọtụtụ nchọpụta e mere gosiri na nkwa a ndị na-eto eto na-ekwe na-eme ka ha ghara ịmalite na nwata nwewe mmekọahụ ma ọ bụ ka ha na-enwe ya naanị mgbe ụfọdụ.’
Nchọpụta ndị Guttmacher Institute mere gosiri na ndị na-eto eto kwere nkwa a nwere ike inwewe mmekọahụ otú ahụ ndị nke na-ekweghị ya na-eme.
Gịnị mere nchọpụta ndị e mere ji ekwu ihe dị iche iche?
N’ụfọdụ nchọnchọ ndị e mere, ndị e ji mee ha bụ ndị kwere nkwa a na ndị nke na-ekweghị nkwa a, ma ha niile na-ele inwe mmekọahụ anya otú dị iche iche.
Ná nchọpụta ndị ọzọ, ọ bụ ndị kwere nkwa ahụ na ndị na-ekweghị ka e ji mee ya, ma ha kweere otu ihe banyere inwe mmekọahụ.
Olee ihe nchọpụta ndị e ji ndị kweere otu ihe mee na-egosi? Dr. Janet Rosenbaum, bụ́ ọkachamara n’ihe banyere ahụ́ ike ndị na-eto eto, kwuru na afọ ise ndị na-eto eto ji kwe nkwa a gachaa, anaghịzi enwe ihe dị iche ná ndị kwere nkwa ahụ na ndị nke na-ekweghị.
Ndị malitere ihe gbasara ikwe nkwa enweghị mmekọahụ nwere ezigbo ihe ha bu n’obi. Ma, nsogbu dị na ya bụ na ha anaghị akụziri ndị na-eto eto ihe ndị ga-enyere ha aka imezu nkwa ahụ. Dr. Rosenbaum kwuru na ọtụtụ n’ime ndị na-ekwe nkwa a ejighị obi ha niile eme ya. Ọ sịrị na ọ bụ onye ọ bụla n’otu n’otu ga-eji aka ya kpebie na ọ gaghị enwe mmekọahụ tupu ọ lụọ di ma ọ bụ nwunye ọ bụghị ide ya n’akwụkwọ.
Baịbụl gbakwara anyị ume iji aka anyị kpebie na anyị agaghị enwe mmekọahụ. Ma ihe ga-enyere ndị na-eto eto aka ime ya abụghị ịgwa ha ka ha dejupụta akwụkwọ ma ọ bụ jiri ọnụ kwee nkwa, kama ọ bụ inyere ha aka ‘ịzụ ikike nghọta ha azụ,’ ka ha nwee ike ịmata ihe dị iche n’ihe dị́ mma na ihe na-adịghị mma. (Ndị Hibru 5:14) A sị ka e kwuwe, ịjụ inwe mmekọahụ tupu mmadụ alụọ di ma ọ bụ nwunye abụghị naanị ka onye ahụ zere ibute ọrịa na afọ ime, kama ọ bụkwa otu n’ime ụzọ onye ahụ si akwanyere Chineke, bụ́ onye malitere alụmdi na nwunye, ùgwù.—Matiu 5:19; 19:4-6.
Iwu ndị dị na Baịbụl na-abara anyị uru. (Aịzaya 48:17) N’agbanyeghị afọ ole anyị dị, onye ọ bụla n’ime anyị nwere ike ikpebisi ike ịna-erube isi n’iwu Chineke nyere ka anyị ‘gbaara ịkwa iko ọsọ.’ (1 Ndị Kọrịnt 6:18) Mgbe onye ahụ lụziri di ma ọ bụ nwunye, obi ga-eru ya ala, ọ gaghịkwa na-echegbu onwe ya ma ọ bụ na-akwa mmakwaara otú ahụ ndị nwere mmekọahụ tupu ha alụọ di ma ọ bụ nwunye na-eme.
Mee Ka Obi Sie Gị Ike na Ịnọ n’Amaghị Nwoke ma Ọ Bụ Nwaanyị Dị Mma